Vashandi veHurumende Vanoti Vacharamwa Zvakare Mabasa Svondo Rinouya
Ndira 19, 2012
Vashandi vehurumende munzvimbo dzakawanda vanonzi vaenda kumabasa kunyange hazvo masangano anomiririra vashandi ava, ange akurudzira kuti varamwe mabasa kwezuva rimwe chete vachigunun’una nezvemari dzavari kutambiriswa.
Asi mumaguta akaita seHarare, Masvingo, Marondera, neBulawayo, vashandi vakawanda varamwa mabasa asi vamwe vavo vaenda kumabasa.
Vadzidzisi vanonzi vaendesa vana kudzimba muBulawayo, uye vamwe vana mukoti varamwawo mabasa muzvipatara zvakaita seMpilo neUnited Bulawayo Hospitals.
MuGweru mangwanani pamahofisi ehurumende, kana kuti paGovernment Complex, apo panovewo nemahofisi aRegistrar General, vanhu vange vachida kutora magwaro ekufambisa vange vakamira mumitsetse vachibatsirwa nevashandi vebazi iri semazuva ose.
Vamwe vevanhu vange vakamiririra kubatsirwa ava vanoti kunyange hazvo vakanzwa nezvenyaya yekuramwa mabasa iyi, vanga vaine netariro yekubatsirwa sezvo vashandi ava vange vari pabasa.
Pamahofisi panotorwawo zvitupa muguta mekare vashandi vange vachiitawo basa rawo semazuva ose.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda mari inodarika mazana mashanu emadhora pamwedzi, iyo vanoti inoenderana nePoverty Datum Line.
Vashandi pari zvino vari kupihwa mari inodarika zvishoma mazana maviri nemakumi matatu emadhora.
Vashandi vehurumende pasi pesangano reApex Council vasangana muHarare vakazivisa kuti vacharamwa mabasa kwesvondo rose kutanga neMuvhuro svondo rinouya.
Sachigaro weApec Council, Amai Tendai Chikowore, vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nekuti gurukota rezvevashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, havasi kuda kutaura navo.
Studio 7 yaedzawo kutaura naAmai Matibenga, asi varamba kutaura nezvekuratidzira kwevashandi.
Asi mutevedzeri wavo, VaAndrew Langa, vaudza Studio7 kuti hurumende iri kuyedza nepainogona napo kuti vagadzirise dambudziko iri, asi mari ndiyo iri kunetsa.
Imwe nhengo yeApex Council, VaOswald Madziva, vatiwo vari kufara nechirwirangwe choitwa nevashandi vehurumende, sezvo vanga vasingaratidzi kudhonzera pamwe munguva dzapfuura.
Kuramwa mabasa kwezuva rimwe kwaitwa nevamwe vashandi vehurumende, kunonzi kwaburitsa matambudziko ari muhurumende yemubatanidza.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe, VaJohn Mufukare, vanoti hurumende inofanirwa kushandisa mari iri kubva kumangoda, iyo inonzi haisi kunyatsoburitswa pachena, kubhadharisa vashandi vayo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaCharles Mangongera, vanotiwo kupinzwa kwezvematongerwo enyika munyaya zhinji munyika zvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kufambiswa kwemabasa muhrumende yemubatanidzwa.
Matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende anonzi ari kukanganisawo vashandi vemakambani akazvimirira, avo vanonyanyotanga vatarisa kuti mushandi wehurumende ari kuhora marii vasati vaitawo hurukuro dzemihoro yavo.
Kusabatanawo kwemasangano anomirira vashandi vehurumende kunonzi kune chekuitawo nekusabudirira kwekuramwa mabasa kwavo, sezvo rimwe sangano revarairidzi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, rakanga rapinda mukuramwa mabasa roga svondo rapera.